Kutheni kungekho Mpikiswano inamandla? | Martech Zone
Kutheni kungekho Mpikiswano inamandla?
NgeCawa, nge-20 kaJanuwari 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kukho umntwana omtsha kwibhloko kwicala lezimvo zeshishini, Ingxoxo-mpikiswano. Indawo yenkonzo ibalaseleyo-bonelela ngendawo yokugcina ukulandelela izimvo zeendwendwe zakho, wandise amagqabantshintshi ngaphaya kwebhlog yakho, kwaye unike ujongano olutyebileyo kakhulu ukubonisa izimvo.
Ayibalulekanga kodwa isenengxaki sisithembiso esivela kwingxoxo-mpikiswano enkulu yokuba ungazithumela kwelinye ilizwe izimvo zakho ukuba uthatha isigqibo sokuyishiya inkonzo. Yipilisi enzima ukuyiginya… ngakumbi ukuba bayayishiya inkonzo yabo kwaye bayicime indawo.
Ndingakhe ndisebenzise ingxoxo-mpikiswano enkulu? Mhlawumbi ... Oko kungabonelela ngeyona nto iphambili kuwo omabini la mazwe… zonke izibonelelo zesicelo sabo ukongeza ekuxhamleni kumxholo owenziwe ngumsebenzisi kwindawo yam.
tags: 2 ababhaliadminababhali ngeposi nganyeukucocaiqulunqaukugcwala ngqoeolsonukukhuthazwa komnyhadalaiijramizintluUkwazisa umcimbiUMichael StelznermarblesAbabhali be-wordpressii-coauthor ze-wordpressababhali begama elinamagama amaninzi
Unomdla? Kufuneka ube njalo!
NgoJanuwari 20, 2008 ngo-9:21 PM
NgoJulayi 21, 2008 ngo-5:36 PM